Duufaan Saacaddiiba Jaraya 215KM Oo Ku Dhuftay Gobol Maraykanka Ah
Texas (Dhamays) – Duufaan xooggan ayaa ku dhufatay gobolka Texas ee dalka Maraykanka. Duufaanta ayaa saacaddii jareysa 215 kiiloo mitir taasi oo ah mid heerkeedu sareey.
Waxaa la filayaa in duufaanku noqoto tii ugu xumayd oo muddo 12 sano ah ku dhufata gobolkaasi Texas ee Dalka Maraykanka. Duufaanka oo ah mid xoog badan ayaa waxa weheliya roobab mahiigaan ah oo halkaasi ka da’aya.
Madaxwayne Donald Trump ayaa ku dhawaqay in duufaantan ay tahay musiibo isla-markaana dowladda dhexe ay gargaar gaadhsiin doonto goobaha ay sida ba’an u saamaysay.
Gavanatooraha Texas Greg Abbott ayaa ka digay in fatahaado ay ku dhufan doonaan degaano badan. Duufaantan oo khubarada ay sheegeen in ay tahay mida heerka afaraad loo yaqaano ayaa dhulka dhigtay geedo magaalada Corpus Christi.
Kumanaan qof ayaa ka cararay guryahooda gobolka Texsas ee dalkaasi Maraykanka. Duqa magaalada Rockport Patrick Rios ayaa ku baaqay in dadka deggan magaalada oo tiradooda dhan tahay 10,000 oo qof sida ugu dhaqsiyaha badan halkaasi looga daad-gureeyo.
Mr Patrick ayaa sheegay in dadka ay ku xannibmeen guryaha halkaasi oo saqafyada ay soo dumeen isla-markana shaqaalaha gurmadka ay waayeen meel ay u maraan sida uu ka soo xigtay Telefiishanka CBS.
Waxaa jira safaf dhaadheer oo ah gawaadhida dadka ka baxsanaya duufaanka.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in laga yaabo Madaxwayne Trump in uu booqdo gobolka Taxas horraanta todobaadka soo socda.
Previous: BILJAMKA: Soomaali Faash Ku Weerarray Askar Oo La Toogtay
Next: Wasiir SAMSAM, Waxaan Ku Hambalyeynayaa Dhamaystirka Biyo-gelinta Wajaale